Swamp ugandaganda TYS165-3 - China Xuanhua Construction Machinery
ugandaganda TYS165-3 ngu 165 enjini umkhondo-uhlobo dozer kunye ngqo drive yiHydraulic, semi-ngqongqo abasarhoxisiweyo kunye ngesanti kubunzulu baphantsi ekuncedeni esebenzayo, umqhubi ulawulo blade kubunzulu baphantsi komhlaba kunye esungulayo kwinqanaba elinye kunye unyathela ulawulo. ugandaganda TYS165-3 luphawulwa phezulu kakuhle, umbono evulekileyo, isakhiwo esenzelwe, ukusebenza lula kunye inkonzo kunye nexabiso eliphantsi yonke quality oluthembekileyo. Kuyinto imveliso uphuculo i ngokusekelwe TYS165-2 ugandaganda. Ukucacisa Dozer ...
ugandaganda TYS165-3 ngu 165 enjini umkhondo-uhlobo dozer kunye ngqo drive yiHydraulic, semi-ngqongqo abasarhoxisiweyo kunye ngesanti kubunzulu baphantsi ekuncedeni esebenzayo, umqhubi ulawulo blade kubunzulu baphantsi komhlaba kunye esungulayo kwinqanaba elinye kunye unyathela ulawulo.
ugandaganda TYS165-3 luphawulwa phezulu kakuhle, umbono evulekileyo, isakhiwo esenzelwe, ukusebenza lula kunye inkonzo kunye nexabiso eliphantsi yonke quality oluthembekileyo. Kuyinto imveliso uphuculo i ngokusekelwe TYS165-2 ugandaganda.
(hayi kuquka nekhuba) ubunzima Operation ( kg) 18300
Uxinzelelo Ground (K Pa ) 28.2
Imiz. ukucoca komhlaba (mm) 375
Dozing umthamo ( m ³) 4.5
Ubukhulu Lilonke ( mm ) 5585× 4222× 3 190
W idth wembadada (mm) 1000
Previous: Swamp ugandaganda SD7LGP
Next: Coaling ugandaganda SD7
220hp 24ton Umgxobhozo ugandaganda
ugandaganda / Swamp ugandaganda / Umgxobhozo Dozer
Sd16l Umgxobhozo ugandaganda
Sd6glgp Umgxobhozo ugandaganda
Shantui Sd16 Umgxobhozo ugandaganda
Shantui Umgxobhozo ugandaganda
Umgxobhozo ugandaganda 220hp
Swamp ugandaganda Kuba Construction
Swamp ugandaganda For Sale
Umgxobhozo ugandaganda Sd16l
Swamp ugandaganda / Umgxobhozo Dozer
Umgxobhozo qha ugandaganda
Used Cat Umgxobhozo ugandaganda
Isetyenziswa D6d Umgxobhozo ugandaganda
omanzi Umgxobhozo ugandaganda
Forestry ugandaganda T165-3